China Ophthalmology optical coherence tomography scanner mocean4000 ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ | SDK
မျက်စိအထူးကုသုံးကွက်အစပ် tomography scanner mocean4000
သွေးကြောဆိုင်ရာပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာ (OCTA) သည် optical coherence tomography ကို အခြေခံ၍ သွေးမစီးဘဲလျင်မြန်သောသွေးစီးဆင်းမှုရှာဖွေခြင်းနည်းပညာဖြစ်သည်။ လောလောဆယ်တွင်၎င်းကို retinal choroid ၏သွေးစီးဆင်းမှုပုံရိပ်ကိုအဓိကအသုံးပြုသည်။ OCTA သည် contrast agent ကိုအကြောဆေးမထိုးဘဲသွေးစီးဆင်းမှုအချက်အလတ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပြီး retinal choroid ၏သွေးစီးဆင်းမှုပြောင်းလဲမှုများကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်ပုံရိပ်ဖမ်းခြင်း၊ ကြီးမားသောစကင်ဖတ်ခြင်းအကွာအဝေး၊ အစွမ်းထက်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ရေတိမ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များ
၁. ၈၀၀၀၀ A-scan/s မြန်နှုန်းမြင့်ပုံရိပ် + ၁၀၀ OCT ပုံများ high-definition superimposition ၁၀၀ OCT ပုံများ high-definition superimposition ၁၂ အနက်
Deep choroid ပုံရိပ်ဖော် (DCI)
2. အကြီးစားအချိန်နှင့်တပြေးညီ SLO fundus ပုံရိပ်ဖမ်းခြင်း၊
အချိန်နှင့်တပြေးညီမျက်စိခြေရာခံနိုင်သော Mocean 4000 သည်အကြီးစား fundus ပုံ ၄၇ ခုနှင့် high-definition OCT ပုံရိပ်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီရရှိနိုင်ပြီးတွေ့ရှိရသည့်နေရာကိုအလွယ်တကူမရှာဖွေနိုင်ပါ။ SLO fundus ပုံ ၅၀ ၏ပျမ်းမျှ superposition သည် signal-to-noise အချိုးနှင့်ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားသောပုံရိပ်ဖော်ခြင်းဖြင့် high-definition fundus ပုံများကိုပေးသည်။ SLO-based eye tracking သည် eye drift နှင့် micro saccades များကြောင့်ဖြစ်ရသောရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည်တစ်စက္ကန့်လျှင် ၁၀၀ ခြေရာခံခြင်း၊ ခြေရာခံတိကျမှု ၁၀ ​​microns နှင့်အောင်မြင်မှုနှုန်း ၉၅%ကျော်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနည်းသောလူနာများအတွက်စံပြဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၃။ ကျောင်းကွန်ယက်အသစ်၏ Quantitative analysis
Macular ဧရိယာ: သွေးကြောဆိုင်ရာသိပ်သည်းဆ perfusion သိပ်သည်းဆ / FAZ / သွေးရည်စီးဆင်းမှုဧရိယာ / သွေးစီးဆင်းမှုဧရိယာ optic disc ဧရိယာသွေးကြောသိပ်သည်းဆ perfusion သိပ်သည်းဆ
4. 16mm wide-range angle scan and data analysis
Mocean 4000 သည် 6mm မျက်ကြည်လွှာအပေါ်ယံမြေလွှာကိုထောက်ပံ့ပေးသည်၊ ၎င်းသည်မျက်ကြည်လွှာကိုခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခြင်း၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးအရေးကြီးသောလက်တွေ့အသုံးချမှုတန်ဖိုးရှိသည်။
Super Light Emitting Diode (SLD), 840 nm ဖြစ်သည်
5μm (optical)၊ 2.7μm (digital)
15μm (optical)၊3μm (digital)
-20 D ~ +20 D
Macula: HD linear scan (6 mm or 12 mm), area scan (6 mm x6mm), six line scan, ten-line scan
OCTA scan သိပ်သည်းဆ
ဓာတ်ပြား၊ ဧရိယာစကင် (၆ မီလီမီတာ x ၆ မီလီမီတာ)
OCTA scan ပါဝင်ပါတယ်
ရှေ့အပိုင်း: HD linear scan (၆ မီလီမီတာသို့မဟုတ် ၁၆ မီလီမီတာ)၊ ခြောက်လိုင်းစကင်ဖတ်ခြင်း
256 x 256 A-scan (သို့) 360 x 360 A-scan (သို့) 360 x 540 A (scan)
3mm x3mm,6mm x6mm, 8mm x 8 mm, 12mm x 8mm
Line scan ophthalmoscope (LSO)
မျက်ကြည်လွှာအထူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ; 3D မြင်ကွင်း; en မျက်နှာမျက်နှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ; တိုးတက်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း; choroidal ပုံဖော်ခြင်း
မျက်ကြည်လွှာအာရုံကြောအမျှင်အလွှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း; ganglion ဆဲလ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း; cup-disc မျက်နှာပြင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ; ရေတိမ်နောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ binocular ဆန့်ကျင်ဘက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
လက်စွဲတိုင်းတာခြင်း; မျက်ကြည်လွှာအထူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ မျက်ကြည်လွှာ epithelial အလွှာအထူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
DICOM စံနှုန်းကိုလိုက်နာပါ။ optional အဝေးထိန်း
ယခင်: Ophthalmic optical coherence tomography ose-280
နောက်တစ်ခု: အလွန်ကြည်လင်သောဒစ်ဂျစ်တယ်ရန်ပုံငွေပုံရိပ်ဖော်စနစ် TNF506
Applanation မျက်ကြည်လွှာဖိအား T170
Ophthalmology AB Ultrasound ရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာ ...